Maxkamada Ciidamada oo xukun ku riday laba dhalinyaro lagu edeeyay kooxda Daacish – Walaal24 Newss
March 24, 2019	0	By walaal24
Maxkamadda Darajada Koowaad ee Ciidamada Qalabka Sida ayaa xukun ku riday laba dhalinyaro oo lagu edeeyay iney ka tirsanaayeen kooxda Daacish sida uu u sheegay Warbaahinta Gaashaanle Sare Xasan Cali Nuur Shuute, guddoomiyaha Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida, kuna xukuntay min lix sano xabsi ciidan ah.
Labada eedaysane ayaa waxay kala yihiin Xuseen Cali Maxamed Muudey oo magiciisa afgarashada yahay Suhayb iyo Cabduqaadir Xaafid Xaaji Cali oo magiciisa afgarashada yahay Qudaama ayaa loo heystaa ka mid ahaanshiyaha maleeshiyada Daacish. Labadan dhagarqabe, ayaa mar kawada tirsanaa maleeshiyada argagixisada Al-shabaab, waxayna sii doorteen ugana wareegeen kooxda daacish oo ay sheegeen in ay jireen sababo ku riixayay ku biiristooda,kuwaasi oo ku qatoma dana shaqsi sida aar-gudasho iyo hanti.
Eedeysanaha koowaad ayaa sheegay in uu ku biiray kooxda Alshabaab 2014, waxa uu kaga biiray tuulada lagu magacaabo Moordiinle, waxa uu sheegay in uu ku dhiirigaliyay nin uu sheegay in uu qabo gabar abtigii dhalay, waxa uu sheegay in dhowr cisho loo taba-barayay isticmaalka hubka sida qoriga AK-47.
Dhagarqabahaan intii uu ka tirsanaa Al Shabaab ayaa maleeshiyada gowraceen adeerkiis, intaas kadib ayuu sheegay in ay maleesiyada daacish u soo bandhigeen ka mid noqoshada ururkooda, waxa uu sheegay in loo soo diray lacag uu safar ugu baxayo Gaalkacyo si’ halkaasi uu uga sii qaado mid ka mid maleeshiyada daacish oo ujeedkiisu ahaa meel ay ku sheegeen buuraha Calmiskaat oo maleeshiyada Daacish gabaad u ah.
Taba-bar kale oo dheeraad ah ayay maleeshiyada daacish siiyeen, waxa uu ku sii bartay Ak-47, B.K.M iyo RPG, Sida uu sheegay waxa uu Daacish kaga soo tegay markii ay dileen saaxiibbo badan oo ka yimid maleeshiyada Alshabaab kuwaasi uu sheegay in loo arkay in ay ka fikir duwan yihiin ayna sidoo kale u yihiin maleeshiyada basaasiin. Ciidamada amniga ayaa soo qabtay xilli ay maleeshiyada u soo wakiilatay dhagridda dadka Soomaaliyeed.Eedeysanaha koowaad ayaa la soo xiray 14/11/2018.
Eedeysanaha labaad ayaa sidoo kale ahaa mid ka tirsan maleeshiyada Alshabaab, waxa uu kaga biiray maleeshiyada tuulada moordiinle. 2014 horaanteedii, waxa uu sidoo kale ka shaqeeyay tuulooyin kale sida Janaale, Awdhiigle. Muddo kadib ayuu ku biiray maleeshiyada Daacish 2016, waxa uu kaga biiray Weydow.
Muddo kadib dhagarqabahaan Wuxuu aaday magaalada Boosaaso ee gobolka Bari, isagoo tababar ku qaatay buuraha gobalka,intii uu daacish la joogay waxa uu la baxay Daahir, waxa uu ka howlgalay Af-Urur sidoo kale meel lagu magacaabo Calmiskaat, Eedeysanaha labaad ayaa la soo xiray 20/11/2018 isagoo u joogo Muqdisho sidii uu u fulin lahaa amarada horjoogayaasha Daacish.
Labada eedeysane ayaa isku aqoonsaday halka ay ka socotay baaristooda, waxa ay u sheegeen hey’adaha baarista in ay kawada tirsanaayeen maleeshiyada Daacish,Ciidamada amniga ayaa u soo gudbiyay Xafiiska Xeer Ilaalinta islamarkaana weydiisatay garsoorka xabsi ku heynta eedaysanayaasha inta ay soo dhameystirayaan dacwadda 05-02-2019, muddo kadib baaristooda waxa ay weydiisteen Maxkamadda Muddeyn Maxkamadeed, xafiiska ayaa codsaday in la muddeyo 02-03-2019.
16-03-2019 ayaa la muddeeyay dhageysiga dacwadda, sedax cisha kadib ayaa loo fariistay, ugu dambeyn maanta ayaa go aan si wada jir ah looga soo saaray, waxaana lagu wada xukumay min lix sano sida uu u sheegay Warbaahinta Gaashaanle Sare Xasan Cali Nuur Shuute, guddoomiyaha Maxkamadda Darajada Koowaad ee Ciidamada Qalabka Sida. eedeysanayaasha ayaa heysta fursad kale oo ay ku dalban karaan Rafcaan hadii aysan ku qancin xukunka Maxkamadda Darajada Koowaad ee Ciidamada Qalabka Sida.
Xaaf: oo ku eedeeyay Madaxda Soomaaliya iney ka danbeyeen xiriirka sii xumaanaya Kenya iyo Soomaliya
Xeer illaaliyaha Guud ee Qaranka iyo wafdi uu hogaaminayo oo gaaray magaalada Baydhabo
Taliyaha Ciidanka Booliska oo tababar u furay Ciidan laga keenay magaaladda Baydhabo
Dhageyso: Taliska Booliiska oo gacanta ku soo dhigay eedeysanayaal dilal ka dhacay magaalada Muqdisho
Daawo: Kulan ku saabsan doorka ay ku leeyihiin dhallinyarada Hannaanka dib-u-eegista Dastuurka.